A nechitima tasva kutimanikidza kuti umbomira, kutarisa nepahwindo uye kunzwisisa rwokuramba achitora nguva yedu. Vatariri zvinonakidza asi anogona dzimwe nguva kutora simba redu rose, refu chitima rwendo ndiyo mukana chinja kure uye usununguke zvako. Kunyatsoshandisa…
The Blog iri pamusoro nzvimbo kupemberera mumagadzirirwo Gore Idzva aine chitima rwendo kuguta chaunofarira European kuti chisingakanganwiki chando pazororo. Ungave uchitsvaga usiku kudanana tsika, munhu zvinoshamisa mafayawekisi kuratidzira kana veboka gore, isu…
Christmas Markets nechitima kunokubatsira kupinda Krisimasi mweya ine rwendo kune rimwe remaguta Europe yepamwoyo. Travel nechitima uye kuti ruzivo rwako kupfuura mashiripiti nokusingaperi! nhepfenyuro dzakawanda dziri mumwoyo peguta, making traveling by…